I-Romania Inombolo Yocingo | Ukuthengisa Kuholela | Database lakamuva Lokuposa
I-Romania Inombolo Yefoni
Database lakamuva Lokuposa » I-Romania Inombolo Yefoni
I-Romania Ucingo Izinombolo
Uhlu lwezinombolo zaseRomania lunikeza ukubuyiselwa okuphezulu ekutshalweni kwezimali futhi nalo lubeka engcupheni yokutshala imali kulo. Ungasebenzisa lolu hlu lwezinombolo zocingo lwabathengi beRomania njengethuluzi lokwakha amathuba, ukumaketha imikhiqizo nezinsizakalo zakho. Imininingwane yethu yocingo yaseRomania ingakusiza ukufinyelela izethameli eziqondiwe ezifanele esikhathini esifushane kakhulu.
Thenga iRom Consumer People Ucingo Ucingo
I-Romania Consumer Ucingo Uhlu
I-Database yakamuva Yokuposa noma i-latestdatabase.com ingumthombo wohlu lwezinombolo zocingo lwabathengi beRomania lwangempela. Inikeza ukunemba kwemininingwane engu-95%, okuqinisekisiwe futhi okuqoqwe ngabasebenzi bethu okuqoqiwe kusuka kumasayithi athembekile kanye nesikhulumi sikhetha uhlu lwezinombolo zocingo lwabathengi, uhlu lweselula, igama, ikheli, izwe nekhodi ye-zip.
Uhlu lwezinombolo zocingo lwabathengi beRomania, luwunombolo yocingo olunembile kunazo zonke futhi olubukeziwe nohlu lweselula olungakuholela ekuthengeni okuhle nasekusebenziseni izingcingo, ukumaketha kwe-sms kanye nemikhankaso yokubiza amakhaza. Ukuqinisekisa ukuthuthuka kwebhizinisi lakho, ukumaketha okusebenzayo okusebenzayo kakhulu nokucacile noma ngokuqondile kumakhasimende akho alindelwe.
Uhlu lwezinombolo zocingo lwabathengi beRomania oluvela kuDatha Yokugcina Yama-imeyli equkethe imininingwane engu-2 Million eqoqwe yokuqoqwa kwenombolo yocingo yabathengi efinyelela ku- $ 8,500 XNUMX kungukukhokha ngesikhashana esithile kanye nesoftware etholakalayo esheshayo engaba uhlobo lwefayela le-Excel CSV futhi inganyathelwa kalula kuye ideskithophu yakho.
Idathabheki Yokugcina Imeyili inikezela ngohlu lwezinombolo zocingo oluqinisekiswe kakhulu futhi oluvuselelwe ukuvusa umkhankaso wokuthengisa ngocingo. Ukuthenga uhlu lwezinombolo zabathengi baseRomania kusuka kuDatha Yokugcina Yamahhala kuyindlela ehlakaniphile kunazo zonke yokuqalisa ibhizinisi lakho njengoba ungabona ukuthuthuka kwebhizinisi lakho, kusebenza kwiklayenti futhi kulungele ukufinyelela umamukeli wakho wethemba lokuthengisa izingcingo.
I-Romania Inombolo Yefoni Umbuzo & Impendulo